Imisa ayay dawlada Qadar ku kabaysaa miisaaniyada dalka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Imisa ayay dawlada Qadar ku kabaysaa miisaaniyada dalka
Madaxweynaha Somaliya ayaa booqasho laba maalmooda ku tagay dalkaasi yar ee Qadar ee uu ka diidey Wahaabiyada Sucuudiga inuu xuriirka u jaro. Waxa si aada loogu soo dhaweyay dalkaasi yar laakiin hodanka ku ah gaaska iyo shidaalka.
War ka soo baxay dalkaasi ayaa lagu sheegay in Qadar ay ku kabi doonto miisaaniyada dalka lacag gaaraysa 70 milyan oo doolar. Lama sheegin in lacagtaasi joogto ahaan doonto sanadkasta iyo inay tahay mid hal ay soo tuureen.
Somaliyya ayaa u baahan lacag adag oo ay kor ugu qaado nolosha dadka maadaama ayna jjrin awood dawladu ku qasabto dadka inay bixiyaan cashuurta oo la ogyahay in dhigmiiratada shabaab ay ka cashuur ururin badan tahay.
Lacagta ay bixinayso Qadar waa lacag aad u yar marka la barbardhigo lacagta ay siisay Turkiga oo ay isku urur diimeed yihiin kuna kabtey markii lacagta dalkaasi dhulka gashay. Inkastoo Turkigu u soo gurmadey markii wahaabiyadu dhulka dhigi gaartey.
Waxa dawladaha Somalida ee isaga kala dambeeyay lagu canaantaa inayna fahansanayn baahiyaha guud ee ay u jeedaan kuwa yaryar.